Ixesha elilinganayo - iMigqaliselo ye-FCC neMimiselo
Imbali yeC FCC kunye neMigaqo
Imbali yoLondolozo lweMbali yoSasazo ibiza "ixesha elilinganayo" elilawulayo "into esondeleyo ekusasazeni ummiselo womxholo 'kwi-golden rule'." Eli lungiselelo loMthetho wezoNxibelelwano ngo-1934 (icandelo 315) "ludinga iziteshi zomsakazo kunye namabonwakude kunye neenkqubo zekhebula ezivela kwinkqubo yazo yokuphatha abaviwa bezombusazwe abafanelekileyo ngokusemthethweni xa kuziwa ekuthengiseni okanye ekunikeni ixesha lomoya."
Ukuba nawuphi na umnikazi welayisenisi uya kuvumela nawuphi na umntu ogunyazisiweyo ngokomthetho kwiofisi yezopolitiko ukuba asebenzise isikhululo sokusasaza, uya kuba namathuba alinganayo kubo bonke abanye abaviwa abanjalo kuloo ofisi ngokusetyenziswa kwesi siteshoni esasasazwayo.
"Ufanelekile ngokomthetho" uthetha, inxalenye, ukuba umntu abe ngumviwa obhengeziweyo. Isikhathi sokumemezela ukuba umntu usebenza kwiofisi kubalulekile kuba kudala ixesha elilinganayo lolawulo.
Ngokomzekelo, ngoDisemba 1967, uMongameli uLyndon Johnson (D-TX) uqhutywe nodliwano-ndlebe olude ngeeyure ezintathu. Nangona kunjalo, xa uMdemokhrasi u-Eugene McCarthy efuna ixesha elilinganayo, amanqanawa enqabileyo isibheno sakhe ngenxa yokuba uJohnson wayengabhengezanga ukuba uya kuqhuba ukulungiswa.
Ngowe-1959, iCongress yalungisa uMthetho woNxibelelwano emva kokuba i-FCC igwebe ukuba ii-Chicago abasasazo kufuneka banike "ixesha elilinganayo" kummeli odolophu omkhulu uLar Daly; umphathi-dolophu owayengummeli nguRichard Daley. Ekuphenduleni, iCongress yadala imimiselo emine kwixesha elilinganayo lolawulo:
(1) ezicwangcisiweyo zeendaba
(2) iingxoxo zeendaba zeendaba zibonisa
(3) amaxwebhu (ngaphandle kokuba umqulu ungomviwa)
(4) kwiziganeko zeendaba ezikwindawo
I-Federal Communications Commission (FCC) isichaze njani le mixolelo?
Okokuqala, iindibano zeendaba zeMongameli zibhekwa "kwiindaba zeengingqi" nangona uMongameli esetyenziselwa ukulungiswa kwakhe. Iingxoxo zeMongameli zikwaqwalaselwa kwakhona kwiindaba-ndawo. Ngaloo ndlela, abaviwa abangabandakanywa kwiingxoxo ababenalo ilungelo "ngexesha elilinganayo."
Umzekelo wenziwa ngo-1960 xa uRichard Nixon noJohn F.
U-Kennedy uqalise uluhlu lokuqala lweengxoxo zethelevishini; Inkomfa yanyanzeliswa kwiCandelo 315 ukuze abaviwa abathathu bangabinqatshelwa ekubeni bathathe inxaxheba. Ngowe-1984, iNkundla yesithili se-DC inqume ukuba "ii-radiyo kunye nezikhululo zethelevishini zingaxhaswa iingxoxo zezopolitiko ngaphandle kokunika ixesha elilinganayo labaviwa abangabamemeliyo." Icala lalethwa yi-League of Women Voters, eyayigxeka isigqibo: "Yandisa inxaxheba enkulu kunabo bonke abasasazo kwintetho, eyingozi kwaye ingacwengekanga."
Okwesibini, yintoni inkqubo yendaba yodliwano-ndaba okanye iindaba ezipapashwe rhoqo? Ngokwe-2000 yezokhetho zonyulo, i-FCC "iye yandise uluhlu lwayo lweenkqubo zokusasazwa ezifunekayo kwiimfuno zokuzibandakanya kwezopolitiko ukubandakanya ukuzizonwabisa zibonisa ukuba zinika iindaba okanye ijelo lomcimbi njengamacandelo ehleliweyo." Kwaye iFCC iyavuma, inikeze imizekelo equka i-Phil Donahue Show, i-Good Morning America kwaye, yakholwa okanye ayikho, uWoward Stern, uJerry Springer, kunye nezoPolitiko ezingalunganga.
Okwesithathu, abasasazo babhekene ne-quirk xa uRonald Reagan eqhuba umongameli. Ukuba bebonise iifilimu ezinqwenela uReagan, "kuya kufuneka ukuba banike ixesha elilinganayo kumchasi kaMnu Reagan." Le ngcebiso yaphindwa xa uArnold Schwarzenegger egijimela igosa laseCalifornia.
Ngaba uFred Thompson uzuze ukutyunjwa kukaMongameli weRiphabhliki, ukuqhutyelwa kwakhona koMthetho kunye noMyalelo wawube ku-hiatus. [Qaphela: "I-intanethi yodliwano-ndlebe" ukukhululwa ngentla kwakuthetha ukuba uStern unokuthetha nodliwano-ndlebe noSchwarzenegger kwaye akadingi ukuba axoxane nabani na abanye abaviwa abangu-134 begunyana.]
Isiteshi somabonwakude okanye somsakazo asikwazi ukujonga isikhangiso sephulo. Kodwa umsasazo akadingeki ukuba anike ithuba lokuphuma komoya kumviwa ngaphandle kokuba unikeze ixesha lokungabikho kowomnye umviwa. Ukususela ngo-1971, izikhululo zethelevishini kunye nezesasazo ziye zafuneka ukuba zenze ixabiso "elifanelekileyo" lexesha elifumanekayo kubaviwa kwiofisi yesebe. Kwaye kufuneka banikeze ezo ntengiso kwizinga elinikezwa ngumthengisi "othandwa kakhulu."
Lo mgaqo ungumphumo wolucelomngeni ukususela kuMongameli uJimmy Carter (uD-GA ngo-1980.) Isicelo sakhe sokukhankanya ukuthenga iintengiso sasinqatshelwe ngamanethiwekhi ukuba "kusasa kakhulu." Bobabili iCCC kunye neNkundla ePhakamileyo yathobela Carter.
Lo mgaqo ngoku uyaziwa ngokuba "ukufikelela okufanelekileyo".
Umgaqo wexesha elilinganayo akufanele udideke kunye neNkcazo yokuLungisa .
Kutheni i-Homeschooling iphakamileyo
Ndifanele Ndifunde Kangakanani?
Iingcebiso zokufumana iiTikiti ezinkulu zeWWE
Ngaba Ndifanele Ndizuze IsiGanga soBudlelwane boLuntu?